Oonobumba beZilwanyana: Oonobumba, isicelo sokufundisa oonobumba besiNgesi kwabancinci | Ndisuka mac
Oonobumba beZilwanyana: Oonobumba, isicelo sokufundisa oonobumba besiNgesi kwabancinci
Mva nje sibona izicelo ezininzi ezenzelwe ukufundela abantwana ekhaya. Kule meko sinesicelo esitsha kwiVenkile ye-Mac App Iilfabhethi zezilwanyana: Iialfabhethi, ejolise ngqo ekufundeni isiNgesi, ukulungiselela abantwana abancinci ekhaya.
Sisicelo esilula nesisisiseko esisinika ithuba lokuba fundisa oonobumba besiNgesi ngezilwanyana ebantwaneni. Inyani yile yokuba asijonganga nesicelo esimangalisayo ngokubhekisele kwizinto ezinokwenzeka, kodwa kufuneka icaciswe gca ukuba indawo esiya kuyo yeyabantwana abaphakathi konyaka omnye ukuya kwemihlanu ubudala.
Umdlalo unokukhetha ukukhetha phakathi kwezinye iindlela zomdlalo, ukusuka kwi "Memo" enika kuphela uhlobo lomdlalo othandwayo apho kufuneka sijike amakhadi kwaye sifumane izibini, umdlalo wealfabhethi kunye nenketho yokuvula yonke imidlalo ukuhlawula. Kule meko kufuneka sitsho ukuba ungadlala kwaye ufunde ngaphandle kokuya ngebhokisi, kodwa Unokuthenga ngaphakathi nohlelo ukugqibezela umdlalo.
Iinkcukacha esingazithandiyo lilizwi elisetyenziselwa umdlalo, Esi sisihloko esibalulekileyo kuba ekugqibeleni zizinto ezincinci eziya kuthi ziphele ukukuva. Eli lizwi liphezulu kakhulu kwaye linzima ukuliqonda nasebantwini abadala, kodwa linolo thintelo lwabantwana banokuthi bathande. Ngayiphi na imeko, kuya kuba kuhle ukuba ilizwi lomdlalo xa sifunda oonobumba linokutshintshwa. Eminye ilungile kakhulu kwaye ngesikhombisi sinokunxibelelana ngokugqibeleleyo, ukuze abantwana bakwazi ukuyenza ngendlela elula kwaye bafumane impendulo kwinto nganye abayichukumisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Oonobumba beZilwanyana: Oonobumba, isicelo sokufundisa oonobumba besiNgesi kwabancinci
I-Apple iyaqhubeka nokusebenza kwintlonipho yokusingqongileyo
U-Eddy Cue uya e-India ukuya kuvula iMac Lab entsha